Toddobaad cusub oo Ogosto ah waxaan soo bandhigeynaa wararka ugu fiican ee la xiriira iPhone gaar ahaan iyo guud ahaan Apple. Toddobaadkan, sida kii ka horreeyay, waxaan helnay warar fara badan oo la xiriira iPhone 7, wararkaas waxay bilaabayaan inay ka hor yimaadaan kuwa aan horey u daabacnay. Tusaalaha ugu dambeeya ee aan ku hayno wararka u muuqda Xaqiiji in ugu dambeyntii iPhone uu sii wadi doono inuu yeesho kaliya hal ku hadla oo ma ahan labo, sidii lagu xaman jiray bilo ka hor. Hadda waa inaan ka aragnaa halkan si loo soo bandhigo rasmiga ah ee iPhone 7 marka xanta ay soo dhaceyso. Isku mid iPhone 7 ugu dambeyntii haddii ay lahaan doonto isku xirka xarkaha 3,5 mm ...
Inta ay Dukumiintiyada gudaha ee laga soo dusiyey iPhone 7 run noqo hana ka mid noqon been abuurka badan ee ku wareega internetka iyo kuwa la xiriira iPhone-ka soo socda ee shirkadda. Gaar ahaan waxaan joojiyay inaan fiiro gaar ah u yeesho wararka xanta ah waqti dheer kahor, maadaama maalin uun ay cadahay, madow kale aakhirkana sheyga Apple soo bandhigtay uu yahay cawl.
JBRB wuxuu sii wadaa inuu kujiro bushimaha adeegsadayaal badan iyo taleefanka iPhone News waxaa waajib nagu ah anshax in aan ku wargalino dhamaan aqristayaasheena. Toddobaadkan Saurik ayaa tirtiray arjiga kuu oggolaanaya inaad ka saarto dhammaan raadadka JAILBREAK, Cydia Eraser sidaas darteed horeyba waxay ula jaanqaadi kartaa JAILBREAK ugu dambeeyay. Haddii aan ka hadalno isbeddelada cusub waa inaan ka hadalnaa Cleo, isbeddel cusub oo taas ah waxay noo ogolaaneysaa inaan habeynno Xarunta Xakamaynta markasta oo aan furno iyo Wave2Waxaad kadhigtaa mid adeegsanaya dareemayaasha dhawaanshaha si aad u damiso iyo shaashadda iPhone-ka.
Toddobaadkan waxaan kugu wargelinnay dhowr codsi iyo ciyaaro aan si ku meelgaar ah u suuragelinnay soo dejiso gabi ahaanba bilaash sida Panorama DMD, Daabacaadda Xarunta Dhexe e Hordhaca Waraaqaha. Ciyaarta usbuuca ee ay soo xulaan Apple waa ciyaarta Dukaanka Ice cream ee Dr. Panda, ciyaar loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta iyada oo aan wax app ah laga iibsan.
Tijaabada xawaaraha: Galaxy Note 7 vs iPhone 6s
Haddii aadan rabin inaad lumiso qalinka Apple, Magnet ayaa ah xalkaaga